Fikrado badan oo ku saabsan sida loo sii kaydiso jeer xiiso leh qabtay on your iPhone ama iPad ama Mac ah? Labada fursadaha in ay inta badan la isticmaalo waa iMovie ama iDVD. Labadan software waxaa loo isticmaali karaa si loo gaaro waxa aad rabto iyo in la wada ama si gaar ah loo isticmaali karo. Samaynta doorasho u dhexeeya iMovie iyo iDVD ku xiran tahay sida aad rabto in aad wax ka bedel aad videos.
iMovie waa software ah oo loo isticmaalo videos tafatirka ma aha oo kaliya on your Mac, laakiin sidoo kale aad iPhone ama iPad, halkaas oo aad ka jari kartaa video ama wada splice mar kale kuu oggolaadaan in aad si toos ah sida video uu aadayo. Haddii aad rabto in aad u hagaajisid videos si ay nuxurka u sahlan tahay in la raaco ama kaliya dari muuqaallada, iMovie waa qalab kugu habboon.
Dhinaca kale, iDVD waa software ah aad u isticmaali karto ee aad Mac kaliya, sida iska cad, sababtoo ah iPad iyo iPhone ma ay heli karaan DVD kaxeeya si ay u gubaan disc ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka Mac dhaqaaqo video ah oo la dhammeeyayna ay si DVD ah. Waxa uu awood u leeyahay in uu yareeyo aad video galay cutubyada sidaa darteed waa u fududahay in ay maraan, si ay ula qabsadaan tayada sawirka la daawado fiican ka, iyo sidoo kale la abuuro bedeley sida waxa aad ka heli leh DVD tafaariiqda.
Laakiin xataa haddii aad sameyso ama ha isticmaalin iMovie, waxaad weli u baahan tahay in ay isticmaalaan iDVD si aad dhaqaajiso movie in disc ah baxsad dheer. Faa'iidada kale ee isticmaalaya iDVD badan iMovie waa in aad la wadaagi karto disc la saaxiibadaa aan iska leh Mac ah, taasoo ku sii qaadan karo oo wax ku ool ah.
Sida loo dhoofin iMovie in iDVD
Haddii goobaha aad Mashruuca waxaa loo sameeyey si sax ah, tani waxay noqon doontaa video tayada ugu sarraysa ee suurtagal ah in mashruuca. Ka dib Waxaad isticmaali kartaa MOV, waayo, gubanaya si DVD isticmaalaya iDVD. Waxaa jira dhowr talaabo oo sahlan oo aad u baahan tahay in si raaco in geeddi-socodka waa dhameystiran yahay.
Tallaabada 1 : Tallaabada ugu horreysa waa in guji Share> 'dhoofinta isticmaalaya QuickTime ...'
Talaabada 2 : box wadahadal Dhoofinta waa muuqdaan hadda, qeybta "Save As" dooran magac aad video for, qaybta 'Xaggee:' dooro meesha aad rabto in aad badbaadin file ah, iyo qaybta 'dhoofinta:' aad u hubiso in fursad aad ku 'Movie si QuickTime Movie 'la doorto. Marka sameeyo, guji badhanka 'Options ".
Talaabada 3 : From suuqa kala gujisid soo socda loo yaqaan 'Movie Settings ", guji" Settings ... "sida u qabo qaybta Video ah.
Talaabada 4 : Hadda, H.264 xulo sida Nooca riixo oo markaas beddeli goobaha kale ee sida hoos ku qoran.
Rate jire ah: 29,97
Frames Muhiimka ah: kasta 30 looxyada
Jire Reordering: xadidin
Hawadda: encode si dhakhso ah (Single-Pass)
Rate Data: Xaddid 1500 Kbits / Sec
Marka sameeyo, riix OK badhanka.
Talaabada 5 : Hadda, guji badhanka Size ah sida u qabo qaybta Video ah, oo ay tahay in la furo goobaha Size dhoofinta aad u.
Dooro '1920 x 1080 HD' u 1920x1080 ama 1440x1080 (1080p) videos, '1280 x 720 HD' u 1280x720 (720p) videos, ama '640 x 480 VGA' u 720x480 (SD) videos for Cabirka ka dibna riix OK.
Talaabada 6 : Tallaabada ugu dambeeya waa in la guji Save. Marka lagu sameeyo, waxaad arki doontaa bar horumar ah oo sida aan ka arki image hoose oo kuu sheegi doona waxa ay mar baa ka hadhay geeddi-socodka ah ee dhoofinta in ay dhamaystiran. Ilaa geeddi-socodka oo dhan waxaa lagu sameeyaa, iska ilaali dhag siinaya batoonka ka bixi.
Sida loo Guba iMovie in DVD
DVD, oo sidoo kale loo yaqaano Digital ah oo isu cajalid ahaa formatted, Been abuurtay, asal ahaan loo sameeyay in lagu kaydiso nooc kasta oo xog digital, si ballaaran loo isticmaalo software iyo faylasha kale digital, video files, files ciyaaraha iyo ujeedooyin badan oo kale. Waxay ka dhigaysa mid la wadaago xogta aad u fudud. Iyadoo isticmaalka DVD ah baahida loo qabo in Wi-Fi / ilaha internet kale la yareeyo. Qalab kasta, tusaale kasta oo uu leeyahay booska ah DVD ah waxaa ku arki kartaa macluumaadka ku saabsan disc ah.
iMovie dhinaca kale waa software ah video tafatirka ee Mac iyo macruufka, taas oo macnaheedu yahay waxa loo isticmaali karaa on iPhone, iPad, iPod mini, iyo iPad taabto. iMovie asal ahaan loo isticmaalaa in lagu soo dhoofsadaan noocyo dhawr ah files si Mac ama ka drive adag. Waxaa dajiyaan karaa videos ama sawiro, daynin user ay u horyaal, mawduucyada, midabka, music, iyo saamaynta daro in raaceyso.
Bal aan aragno sida fudud oo si sahlan ay tahay si ay u gudbiyaan iMovie eee DVD la talaabooyin fudud oo kaliya dhowr.
Tallaabada 1 : Beddelaan iMovie Project in MP4 isticmaalaya QuickTime - Habka ugu horeysay si ay u gudbiyaan iMovie video in MP4 waa via isticmaalaya sifooyinka ah laftiisa iMovie. Hoos waxaa ku qoran waa edbinta faahfaahsan oo ku saabsan diinta iMovie in MP4 in iMovie. Marka lagu sameeyo oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa iMovie Launch. Guji "Share> dhoofinta isticmaalaya QuickTime" baar ku menu sare.
Markaas uu furmo suuqa la odhan jiray "Save dhoofiyo file sida ..." booda. Guji "Dhoofinta" doorasho oo ay helaan "Movie in MPEG-4" ee hoos u soo dhaadhacay menu. Haddii aad u baahan tahay in lagu daro goobaha qaar ka mid ah inay qaab file video ah, oo aad button Settings riixi kartaa; haddii aan, si toos ah badhanka "Save" inay u dhoofiyaan file .mp4 ka iMovie.
Talaabada 2 : Riix halkan si ay u soo baxdo iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate on your computer, software aad u fiican oo kuu oggolaanaysa in aad loogu badalo, kor loogu qaado, edit, gubi, download, qabashada, abaabulo oo xitaa ka ciyaari wax videos on Mac iyo Windows labadaba. Waxay caan ku tahay isagoo mid ka mid ah converters ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo xawaare ilaa 30 jeer ka dhakhsi badan ay tartan, iyo sidoo kale waa video Downloader u fiican. Waxaad ka shalaayi doonin socda for this mid ka mid ah a nooc oo dhan-in-mid video qalabeed ka Wondershare.
Talaabada 3 : Import M4V - Kadib markii ay this video M4V Converter, waxaad u baahan tahay in ay soo dhoofsadaan files in aad rabto in aad si loogu badalo. Si aad u samayn, in aad u tagtaan inaad tab ah 'Beddelaan' ka dibna File> 'Load files Media ...' ama, haddii kale, waxa kale oo aad dooran kartaa fursad aad ku 'DVD Load files ...' haddii ay dhacdo faylasha in aad rabto in aad isticmaasho waa DVD ah. Waxaad sidoo kale riixi kartaa the '+' calaamad yar ama calaamad, la siiyaa marka dhinaca bidix ugu hooseysa interface app in ay caleenta iyo geliyaan faylasha video ka your computer.
Talaabada 4 : Doorashada template ah - Marka aad si guul leh laga keeno video files in aad rabto in aad ku gubi in DVD ah, guji tab ah 'Guba' ka sare ee interface ka dibna dooranayaan ee 'Guba' qaybta ' Hawl: ', waxaad ka heli doontaa dhanka gacanta midigta sare ee interface ka. Tani waxay sidoo kale waa uu furmo halkaas oo aad ka dooran kartaa mid ka mid ah aad marto DVD menu jecel hortiisa ka ololaya DVD ah; waxaad arki doontaa fursadaha hoose ee shaashadda.
Talaabada 5 : Guba si DVD - ee la soo dhaafay iyo tallaabada ugu dambeysa ee gubanaya aad file gal DVD iyo si fudud aad u leeyihiin in ay ku dhufteen ee ku saabsan 'Guba' button muujiyay hoose ee midig ee shaashada iyo Wondershare Video Converter Ultimate samayn lahaa inta kale adiga.
Gacan-jabis AVI: Sida loo Copy DVD in AVI Isticmaalka gacan-jabis
> Resource > DVD > Sidee si ay u wadaagaan iyo iMovie gubi in iDVD